Dagaalka Dabka, Khadka Tooska ah ee baaritaanka kuleylka, Nidaamka ceeryaanta biyaha - Anbesec
Qalabka Khadka Tooska ah
Nooca Dijital ah ee Qalabka Heerka Tooska ah ee NMS1001 Taxanaha
Nooca analog Nooca Tooska ah ee Qalabka NMS2001
Qalabka dab-demiska ceeryaanta biyaha
Baadhitaanka kuleylka toosan wuxuu siiyaa shaqo baarista digniinta hore jawiga la ilaaliyo. Baarayaasha kuleylka toosan ayaa awood u leh inay ogaadaan kuleylka meel kasta oo dhererkooda ah oo loogu talagalay in loogu isticmaalo codsiyada ganacsiga iyo warshadaha.
Anbesec waxay siisaa alaab tartan ah
saldhigyada saliida iyo kiimikada, warshadaha birta iyo birta, warshadaha tamarta, tareenka laga raaco iyo goobaha ganacsiga ee waaweyn.
Khadka Tooska ah ee Ogaanshaha Cable NMS1001
Dabka ceeryaamo biyo ...
Qaybta ceeryaanta-saarida biyaha
Waalka kontoroolka aaga
Qulqulka ceeryaanta biyaha
Qiiqa ceeriga ee biyaha ...
Anbesec Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2015. Tan iyo markii la aasaasay, shirkadu waxay u heellan tahay bixinta habab hal-ku-ilaalin dabka iyo qandaraas siinta mashaariicda ka hortagga dabka. Markay shirkaddu sii korayso, waxaan soo uruurinnay koox khubaro khibrad u leh ku leh warshadaha si aan u siino…
Bandhiggii 11aad ee Uzbekistan (Tashkent) ee Dabka Caalamiga
Jan / 11/2021
Bishii Nofeembar 2019, Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. waxay kaqeyb qaadatay Securex Uzbekistan 2019, Bandhigga 11aad ee Caalamiga ee Amniga, Amniga iyo Dabka. Securex Uzbekistan waxaa sanad walba lagu qabtaa Xarunta Carwada Tashkent ee Uzb ...
Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. iyo Furd Fire Technology Technology waxay aasaaseen xiriir iskaashi istiraatiiji ah oo muddo dheer soconaya.
Diisambar / 16/2020
Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. iyo Furd Fire Fire Technology Group waxay aasaaseen xiriir iskaashi istiraatiiji ah oo muddo dheer soconaya Bishii Oktoobar 2020, Beijing Anbesec Technology Co., Ltd reac ...
Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. waxay heshay shahaadada UL ee alaabada lagu ogaanayo kuleylka toosan
Bishii Oktoobar 2020, Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. waxay heshay shahaadada UL ee alaabooyinka lagu ogaanayo kuleylka toosan Maaddaama ay tahay hoggaamiye caalami ah sayniska badbaadada, UL waxay leedahay khibrad in ka badan qarni ah xalalka nabdoonaanta hal abuurka leh. Beijing Anbesec Techno ...
Fadlan si xor ah nala soo xiriir haddii aad wax su'aalo ah qabtid